Umfanekiso wokuqala ongafanelekanga weGalaxy Note 8 | Iindaba zeGajethi
Umfanekiso wokuqala ongafanelekanga weGalaxy Note 8
Ngokungafaniyo nento eyenzekileyo ngeGPS S8, apho besisazi phantse zonke iinkcukacha nokusebenza kweflegi yenkampani, kubonakala ngathi amaKorea afuna ukuwunonophela ngakumbi lo mbandela kwaye akakhange avuze ulwazi olunxulumene Iflegi elandelayo eza kubona ukukhanya ngo-Agasti 23, njengoko sikwazisile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Kodwa kwakhona u-Evan Blass, osisithethi esingekho semthethweni kuninzi lwehlabathi lweemveliso ze-smartphone, upapashe kwakhona ngowuphi umfanekiso wokuqala ongekho semthethweni we-Galaxy Note 8, Isiphelo sendlela apho inkampani yaseKorea ifuna ukulibala i-Galaxy Note 7 yonyaka ophelileyo.
Njengoko sibona kumfanekiso ongentla, iNqaku 8 litsalela ingqalelo ekuboneni ukuba izakhelo ezingaphezulu nezisezantsi zincitshisiwe ukuya kwintetho encinci, into efana kakhulu nento esinokuyifumana kwi-S8 kunye ne-S8 + eboniswe ekupheleni kuka-Matshi kulo nyaka, kodwa ngescreen esikhulu se-6,4-intshi ngesayizi enkulu kakhulu. Ngokumalunga neenkcukacha, U-Evan akaqinisekisanga okanye akavumanga naziphi na izinto ezihamba kwiibhloko ezininzi zetekhnoloji, iinkcukacha esizichazayo ngezantsi.
Ukucaciswa okunokwenzeka kwiGlass Qaphela 8
Isikrini se-intshi esingu-6,4 esine-4k resolution kunye nepaneli ye-SuperAMOLED
Iprosesa ye-Snapdragon 835 / Exynos 8895
Ukugcinwa kwangaphakathi kwe64GB
Ikhamera yangasemva eyi-12 mpx
Ikhamera engaphambili eyi-8 mpx
Umncedisi we-Bixby onamaqhosha azinikeleyo, nangona exhasa isiNgesi nesiKorea kuphela.
Ukutshaja ngokukhawuleza ngaphandle kwamacingo
Nge-23 ka-Agasti ezayo, nangona uninzi lwenu lusekhefini, Iqela leActualidad Gadget liya kulinda intetho ukukuthumelela lonke ulwazi oluza kuvela kwinkampani yaseKorea kumsitho oza kubanjelwa eNew York.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Umfanekiso wokuqala ongafanelekanga weGalaxy Note 8
Kuyakubakho uMhlali wobubi kwiNintendo Shintsha, ingqokelela yeZityhilelo